Gbasara Anyị | Sichuan Ideasys nkenke Machinery Co., Ltd.
Sichuan Ideasys Precision Machinery Co., Ltd. nwere ihe karịrị 2000 square mita nke mpaghara mmepụta, nhazi nkenke nke akụkụ dị iche iche. The azụmahịa na-agụnye wax ọnwụ nkenke mgbatị machining, ibe ya bụrụ machining, anwụ mgbatị machining, mmanya, tube na mpempe akwụkwọ machining. Ngwongwo na-ekpuchi igwe anaghị agba nchara, igwe na-eguzogide okpomọkụ, carbon carbon, obere alloy nchara, alloys dị elu dị elu, ọla na-abụghị nke ọla. Na elu mmepụta ngwá na ule akụrụngwa, ike ike nke ebu na ngwaahịa imewe / mmepụta, mgbatị mmepụta na nkenke machining.
Sichuan Ideasys Precision Machinery Co., Ltd. na-etinye aka na ngwaahịa nyocha & mmepe dị ka otu n'ime nrụpụta ọkachamara nwere ikike mbubata na mbupụ. Main ngwaahịa: oge ​​ọgbụgba, forgings, nkenke machining akụkụ, anwụ mgbatị, ndị ọzọ n'ibu akụkụ na nzukọ akụkụ maka mbupụ.
Ọrụ azụmahịa na ọtụtụ ụdị ụgbọ ala, kemistrị mmiri, ngwa eletriki, akụrụngwa ọgwụ, igwe nri, ngwa ọrụ mmanụ, injin yana mgbakọ yana wdg. Company nwere fọrọ nke nta 20 mụ ahịa na obodo, ngwaahịa na-tumadi exported na North America, European Union, Australia na ihe karịrị mba 20 na mpaghara.
Site na akụrụngwa mmadụ siri ike, teknụzụ dị elu na akụrụngwa, teknụzụ na-eduga, ihe ọhụụ na ndị ọrụ R & D, ọrụ dị mma na ngwa njikwa oge a, honed ruo ọtụtụ afọ nke asọmpi n'ahịa mba ụwa wee bụrụ ezigbo onye na-eweta GE, BOSCH, Voestalpine, Audi, Foster Wheeler na ọtụtụ ndị ọzọ amaara mba ofesi.
Na "iguzosi ike n'ezi ihe mbụ, ọrụ mbụ" azụmahịa nkà ihe ọmụma na "ọhụrụ, ịchụso kacha mma," entrepreneurial mmụọ, anyị ji obi dum na-anabata ndị enyi ụwa na-abịa ịkpọ na kpakorita azụmahịa maka ibe oké mmepe!
Okwu Onye isi oche
Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ na ọzụzụ, Fred gara Germany na nke mbụ iji sonye na Hannover Industrial Fair na Eprel 2010, wee mụtakwuo banyere mkpa ndị ahịa na ọdịbendị nke mba ndị ọzọ.
Mgbe ihe ngosi ahụ gasịrị, ọ gbakọtara nke ọma nsogbu ndị mere na usoro ahụ, ọ gara n'ihu na-emeziwanye onwe ya n'ọdịnihu.
N'ime usoro a, ọ sonyere n'ihe karịrị ngosi iri na France, Germany, Poland, Thailand na United States, gara leta ndị ahịa dị iche iche na mba 20, wee ghọta mkpa onye ahịa ọ bụla na ihe gbasara ụmụ mmadụ na ọdịdị ala.
Na November 2014, o guzobere Honevice, ụlọ ọrụ ahia mba ofesi, na echiche nke "ofkwụwa aka ọtọ" na "ọrụ" dị ka nkà ihe ọmụma azụmahịa. Enwere mmadụ iri na otu. Dị ka onye isi njikwa ọ jisiri ike na-arụ ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ dum, nye ọrụ ka mma maka mkpa ndị ahịa, ma jigide nkà ihe ọmụma azụmahịa nke iguzosi ike n'ezi ihe. N'ime afọ ole na ole gara aga, anyị enwetawo nkwado na ntụkwasị obi nke ọtụtụ ndị ahịa. Ọ bụ nkwado ha na-eme Honevice na-abịa ugbu a.
Ọ bụ ezie na enwere ọtụtụ ihe mgbochi n'ụzọ, dịka ọmụmaatụ, onye ahịa duhiere anyị ma kpatara anyị ọnwụ ọnwụ. Mana anyị adaghị mbà, tụgharịa mmiri iji belata mfu ahụ, ma rụsie ọrụ ike n'akụkụ ndị ọzọ iji mejupụta mmejọ a. Odida bu nne oma. Ọ bụ ezie na nke a bụ ahụmahụ na-adịghị mma, anyị anọgidewo na-enwe nchekwube, mụta ma chịkọta site na ahụmịhe a. Nke a bụ mmega ahụ anyị na Honevice!
N'okpuru nrụgide nke ọrịa ahụ, ọ guzobere Ideasys Precision Machining Factory, nke na-etinye njikwa mma na ọkwa dị elu. Ọ bụ ezie na azụmahịa azụmahịa anyị na mba ọzọ emeela nke ọma na afọ ole na ole gara aga, mgbe ụfọdụ anyị nwere ọtụtụ enweghị enyemaka. Dịka ọmụmaatụ, onye ahịa na-arịọ ụbọchị nnyefe nke ngwaahịa a, onye na-eweta ngwaahịa anyị enweghị ike ịnapụta ngwaahịa ahụ n'ihi ọtụtụ ihe. Mana ugbu a, anyị nwere ike ijikwa oge nnyefe n'onwe anyị. Ọ bụrụ na oge nnyefe anyị kwere nkwa na onye ahịa na-eru nso, anyị ga-eme ike anyị niile iji mezuo nkwa ọ bụla nye onye ahịa n'ọnọdụ niile!
Agbanyeghị na 2020 bụ afọ siri ike maka ọtụtụ mmadụ. Ọrịa ahụ emetụta ụwa niile, ọtụtụ ụlọ ọrụ emechiela n'ihi nke a. Agbanyeghị, anyị meriri ọtụtụ nsogbu ma guzobe Isys. Ọbụna ndị enyi m jụrụ ya ma ọ meriri lọtrị ahụ, ma o meghị. Anyị na-ebili ọtọ ma bịaruo ihe mgbaru ọsọ mgbe ọrịa ndị ọzọ na-ewute ndị ọzọ. Ya mere, Isys tolitere n'ọnọdụ siri ike otú ahụ!
Ugbu a ndị otu anyị nwere karịa mmadụ 30, nke na-enye nkwa siri ike maka njikwa njikwa na nnyefe. Kwe ka ndị ahịa mara na ọ dị mma ịhọrọ anyị. Anyị na-emepe emepe na nnukwu ọsọ iji wuo ụlọ ọrụ zuru ezu. Anyị ewu nke ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na omenala na-elekọta mmadụ na-aghọ otu n'ime anyị mkpa mmepe echiche. Anyị na-etinye mma na nke mbụ ma gosipụta ike zuru ezu ike, gụnyere mgbakọ, nyocha na mmepe, na imewe. Ebumnuche bụ ịghọ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ n'etiti-na-elu n'ọdịnihu, na ike nrụpụta siri ike, yana ịghọ ụlọ ọrụ nwere ụfọdụ njirimara.
Ihe mgbaru ọsọ dị mkpirikpi bụ iji nweta mpaghara mmepụta nke ihe karịrị 3000 square mita, karịa ndị ọrụ 50 na ntụgharị nke ihe karịrị $ 5 nde. Ma nwee ikike zuru ezu siri ike. Ọ ga-etolite na nduzi nke ụlọ ọrụ nrụpụta dị elu dịka ụlọ ọrụ ndị agha, aerospace na ụgbọelu.
Ọdịnihu anyị n'ọdịnihu bụ: anyị chọrọ ịbụ ụlọ ọrụ pụrụ iche na njikwa nkọwapụta zuru oke. Mepụta ezigbo ọnọdụ ka mmadụ niile nwee mmetụta nke ịbụ ebe a. Nwee akụrụngwa dị elu, ikike mmepụta na ikike nyocha, ma nwee atụmatụ dị ike yana ike R & D.